Ihotele iMarburger Hof - I-Airbnb
Ihotele iMarburger Hof
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguHotel Marburger Hof
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uHotel Marburger Hof iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-Marburger Hof yihotele elawulwa lusapho kumbindi wedolophu yaseMarburg kwaye ineendawo zayo zokupaka. Ngokubhekiselele kwizinto zokuzonwabisa, iindwendwe zixutywa ekuseni ngesidlo sakusasa esityebileyo kwaye ngokuhlwa kwindawo yokutyela yaseDomingo.
Amagumbi ezoqoqosho, uhlobo lwethu oluncinci noludala lwegumbi, anebhedi enye (0.90 m x 2.00 m) okanye ibhedi elala abantu ababini (1.80 m x 2.00 m). Uhlobo lwegumbi elitofotofo linedesika enendawo yokuhlala negumbi lokuhlambela elinemibalabala ngeminyaka yoo-70 eneshawa okanye ibhafu nomatshini wokomisa iinwele.
Amagumbi okutshaya nawokungatshayi ayafumaneka (kuxhomekeke ekufumanekeni)
Ubukhulu begumbi elinye: malunga. 12
mvele Ubukhulu begumbi Igumbi elilala abantu ababini: malunga ne-18 mvele
Ixabiso elidwelisiweyo libandakanya ezi nkonzo zilandelayo:
-isidlo sakusasa esityebileyo
- Ukusetyenziswa kwebha yethu yeti yasimahla kwindawo yokwamkela iindwendwe
-Ukusetyenziswa kwesikhululo sethu soshishino kunye nokufikelela kwi-intanethi kwindawo yokwamkela iindwendwe
-I-WiFi yasimahla kuyo yonke ihotele
- 1 ibhotile yamanzi iyafumaneka kwigumbi lakho
Amagumbi ezoqoqosho, uhlobo lwethu oluncinci noludala lwegumbi, anebhedi enye (0.90 m x 2.00 m) okanye ibhedi elala abantu ababini (1.80 m…
4.63 (iingxelo zokuhlola 153)
Ihotele iMarburger Hof iphakathi kwesikhululo sikaloliwe esikhulu kunye nedolophu endala, kanye ecaleni kweCawa ka-Elisabeth edumileyo. Ukusuka apha luhambo lwemizuzu emihlanu ukuya kwindawo edumileyo egoso-goso, enamagingxigingxi, enamagingxigingxi kwaye enyuka idolophu yaseMarburg.
Umbuki zindwendwe ngu- Hotel Marburger Hof